Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo ciwaankiisa doorashada 20/21 ka dhigtay Kenya. | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo ciwaankiisa doorashada 20/21 ka dhigtay Kenya.
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo ciwaankiisa doorashada 20/21 ka dhigtay Kenya.
Diblomaasiyiinta iyo falanqeeyeyaasha xiriirka caalamiga ah ayaa aaminsan in go’aanka Dowladda Soomaaliya ku gaartay hoos u dhigidda xiriirka Kenya waxa ay filayaan uusan dhab ka ahayn Xukuumadda Soomaaliya sababtana waxa ay u arkaan in ay tahay joogitaanka kudhowaad 3 Kun oo Askeri oo katirsan Ciidanka howlaglka midowga Afrika ee Soomaaliya kuwaas oo ay leedahay Kenya iyo dhinaca Kenya oo ay xeryaha qaxootiga ku jiraan muwaadiniin Soomaaliyeed oo kudhow Nus Milyan.
Dad kudhow maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in Isniinta maanta ah uu xafiiska guddoomiyaha gobolku abaabulaya Bannaanbax lagu taageerayo mowqifka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku wajahan hoos u dhigidda heerka diblomaasiyadda Kenya, waxa la filayaa in dowladdu soo saarto go’aanno looga digayo musharixiinta in ay wax xiriir ah la yeeshaan Kenya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa doorashadii 2016 waxa uu ku ololeeyey Waddaniyad & Nacaybka Itoobiya balse 4 sano oo xodxodasho iyo Isdhexgal Itoobiya ah waxa ay u muuqataa in uu sanadkan ololaha doorashada 2021 ku geli doono Waddaniyad & Nacaybka Kenya! taas oo aad u adkaan doonta sanadkan sida ay qabaan diblomaasiyiinta iyo falanqeeyeyaasha xiriirka caalamiga ah.
Dhanka kale dadka qaar ee falanqeeya siyaasadaha wadamada dhaca geeska Afrika ayaa ku doodaya in ay sax tahay in dowladda Soomaaliya hoos u dhigto xiriirka Kenya, iyagoona sabab uga dhigay dhowrkaan qodob ee socda si bey yiraahdeen Kenya loogu caadiyo:
1. Kiiska arimaha bada.
2. Faragelinta Jubaland.
3. Gabood faladii gobolka Gedo.
4. Darbiga sharci darada ah.
5. Weeraradii bareerka ahaa ee shirkada Hormuud.